Sonic the Hedgehog2၏နောက်တွဲယာဉ် LEGO Sonic Mania အကြောင်းဘာပြောထားသလဲ။
11 / 02 / 2021 11 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 1281 Views စာ0မှတ်ချက် Brent Waller, Covid-19, Guillaume Roussel, Ideas, Lego, Lego အရွယ်အစား, Lego Ideas, Paramount, Seinfeld, Sonic Mania ကို, Sonic အ Hedgehog, Sonic အဆိုပါ Hedgehog 2, စတိဗ်ဂင်းနစ်စ်, E သည်artဇကမ္ဘာလုံး, လက်နှိပ်စက်, Viv Grannell
Paramount သည် Sonic the Hedgehog2အတွက်နောက်တွဲယာဉ်နှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုနောက်ဆုံးတွင်ကြေငြာခဲ့သည် - သို့သော်၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ကြောင်း Lego Sonic Mania အစုံရောက်ရှိမည်နည်း
ပထမဆုံးဇာတ်ကား Sonic the Hedgehog ကို ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီတွင်စတင်ခဲ့သည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်သုံးလနှောင့်နှေးခဲ့သည်။ COVID-2020 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အခြား ၂၀၂၀ ထုတ်လွှတ်မှုအားလုံးနီးပါးကြောင့်၎င်းသည်ယခုနှစ်၏ဆth္ဌမမြောက်အမြင့်ဆုံးစာရင်းဝင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် - particilsly အမြီး၏နိဒါန်း (လုယူသောသူ!) teased သောမူရင်းရုပ်ရှင်၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ရပ်များပေးထားသည်။ The လှောင်ပြောင်နောက်တွဲယာဉ် Sonic အတွက် Hedgehog2သည်ယခုအခါအွန်လိုင်းတွင်အပြေးပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အမြန်လမ်းလျှောက်သူနှင့် ၂၀၂၂၊ 8ပြီ ၈ ရက်၊
ဒါကလာမည့်၏လွှတ်ပေးရန်အဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း Lego Ideas Sonic Mania ထား? ကောင်းပြီ, အလားအလာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုလုံးတွေအများကြီး Viv Grannell ၏စီမံကိန်း ဗီဒီယိုဂိမ်းထက်ရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းထက်အခြေခံသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအဘို့အအဓိပ္ပာယ်စေလိမ့်မယ် Lego Group မှ၎င်း၏ Sonic set ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းသည် Paramount ၏နောက်ဆက်တွဲအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည့်အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ရုပ်ရှင်၏ပွဲ ဦး ထွက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။
သတိရသင့်သည်မှာ ၂၀၂၁ သည် Sonic the Hedgehog ဂိမ်းအပြီးအနှစ် ၃၀ ကိုအမှတ်ရခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် Lego အုပ်စုလိုက်ချစ်တယ် နျစ်ပတ်လည်နေ့။ သို့သော် Sonic Mania ကိုယခုနှစ်အတွင်းစတင်တပ်ဆင်ရန်ကြေငြာခြင်းမှအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Ideas တောင်မှပိုရှည်တောင်ပံအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသောအစုံ (Steve Guinness ရဲ့လက်နှိပ်စက်ဥပမာအားဖြင့်, ဒါမှမဟုတ် Brent Waller ရဲ့ Seinfeld).
တဖန်တုံ၊ Sonic Mania အစိမ်းရောင်ဟေးလ်ဇုန် မူလက p ဖြစ်ခဲ့သည်art ပထမ ၂၀၂၀ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုစက်တင်ဘာလတွင်ကြေညာခဲ့သည်။ Guillaume Roussel ၏ The Eartဇကမ္ဘာလုံး အဆိုပါစဉ်အတွင်းမေးမြန်းခြင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှာဖြတ်ကိုဖန်ဆင်းသောတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်ခဲ့သည် Lego အဖွဲ့လိုအပ်တယ် ခဏကြာတော့ Grannell ရဲ့ Sonic စီမံကိန်းကိုစဉ်းစားရန်။ ဒါက extra ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် set ကိုတီထွင်ရန်အချိန်ကုန်ခဲ့ရပြီး၎င်းသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ထုတ်လုပ်မှုသို့ထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်သည် - စarticularly အဆိုပါ minifigure မှိုပေးထားပြီးသားမှတဆင့်တည်ရှိ Lego အရွယ်အစား။
ဒီအဆင့်မှာ၊ ဟုတ်လားဆိုတာကိုပြောဖို့ခက်တယ် Lego အုပ်စုသည်၎င်း၏ Sonic Mania ကိုနှစ် ၃၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားများအတွက်အချိန်မီစတင်ရန်သို့မဟုတ်လာမည့်နှစ်Aprilပြီလတွင်လက်တွေ့ဘဝ Sonic အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုအတွက်ငွေဖြုန်းရန်ရည်ရွယ်လိမ့်မည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Sonic the Hedgehog 30 ထွက်မယ့်ရက်ကိုကြေငြာခြင်းကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုအနည်းဆုံးစဉ်းစားရမယ့်ခေတ္တရပ်တန့်သွားစေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ခက်ပါတယ်။
← LEGO ၏ဒီဇိုင်နာများကဆိတ်သည်လိုချင်သည်ကိုသိသော်လည်းပြန်မယူနိုင်ပါ
LEGO သည်ပထမဆုံးရက်စွဲများကိုစိတ်ဖိစီးမှုနည်းစေပါသလား။ →